Fiahiahiana varo-maizina :: Vahiny roa voasambotra noho ny raharaha halatra taova • AoRaha
Nosamborin’ny mpitandro filaminana ny teratany vahiny roa lehilahy sy vehivavy mpisakaiza, tany Ramena-Antsiranana II, afak’omaly.
Voatonontonona amin’ny halatra taova izy ireo. Lehilahy Malagasy iray akaiky azy mivady no nilaza ho nahita taovam-pananahan’ ny lehilahy sy vehivavy naterin’ olona tao amin’ny tranon’izy mivady, tamin’ny alin’ny 4 avrily lasa teo.
“Niaraka nipetrapetraka teo amin’ny lavarangan’ny tranon’ireo mpivady vazaha io Malagasy naman’izy ireo io tamin’ny alin’ny 4 avrily. Nisy sambokely iray tonga nanatona ilay trano ka nanatitra vata mitahiry hatsiaka iray. Nalain’ilay raim-pianakaviana vazaha io vata io dia nateriny tao an-dakozian’ny tranon’izy ireo. Mody nilaza ho nange­taheta ilay Malagasy ka nankany an-dakozia. Noso­kafany ilay vata dia nilaza ho nahita ireo tao tao anatiny izy. Nalainy sary tamin’ny finday izany ka tsikaritr’ireo mpivady vahiny io fihetsiny io. Nalain’ izy ireo tany aminy an-terisetra ny findainy. Lasa nitsoaka ilay Malagasy taorian’izay ka nampandre olon-kafa ny zavatra hitany. Io no fitantaran’ilay olona taminay rehefa nohadihadiana izy”, hoy ny loharanom-baovao akaiky ny mpanao fanadihadiana.
Tonga teny amin’ilay trano ny polisy, zandary ary ny Tafika. Mbola hita tao ireo vazaha mivady saingy samy mamo. Nosavaina ny tranony sy ny teo amin’ny manodi­dina fa tsy nahitana inona. Nojerena ilay vata tsy nahitana zavatra mampiahiahy. Notazonina ireo vazaha. Nalaina ny finday miisa telo sy ny solosaina iray. Nalaina am-bavany ny lehiben’ny fokontany sy ny vehivavy iray nampandre io lehiben’ny fokontany io. Tsy misy marika hatreto hilazana ny fisiana na tsia ny varomaizina taova.
Voina amperin’asa Lehilahy roa maty nihotsahan’ny tany
Fitaterana an-tsokosoko Mpamily roa naiditra am-ponja
Fanafihana Tafaverina ny vola 14 tapitrisa ariary voaroba
Hala-jaza :: Maty voatifitra ny iray tamin’ ireo mpangalatra zaza varira
Fanafihan-jiolahy :: Lehilahy maty voatifitra teo amin’ny tratrany